नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार'को दोस्रो दिन आज कुकुर हरुको पूजा गरेर कुकुर तिहार मनाइँदै छ । आजै लक्ष्मी-पूजा पनि मनाइँदै छ । हरेक जसो तिहारमा गाई पूजा र लक्ष्मी-पूजा एकै-दिन पर्ने भए पनि यो वर्ष भने कुकुर तिहार'को दिन परेको छ । यस वर्ष चर्तुदशी तिथि बिहान र दिउँसो देखि औसी छुने भएका'ले साँझ लक्ष्मीको पूजा र बिहान कुकुर+तिहार म'नाइँदैछ । प्रत्येक वर्षको कृष्ण चतुर्दशी दिन कुकुरको पूजा गरिन्छ । आज कुकुर लाई टीका तथा माला लगाइ दिएर मीठा-मीठा खाने-कुरा खान दिई पूजा गरिन्छ । आजका दिन कुकुर'को पूजा नगरी खाना खाएमा पापी भइन्छ भन्ने भनाइ छ । आजको दिन:लाई नरक चतु'र्दशी पनि भनिन्छ । कुकुर घर-पालुवा आज्ञाकारी, घर रक्षक एवम् गुनिलो जनावर पनि हो । यो जनावरले सुँघेर अपरा'धीहरू पत्ता लगाउने र कुकुर-लाई भैरवको बहान पनि भनिन्छ । कुकुर इमान्दार र वफादार जनावर पनि हो । घरको रेख'देख गर्ने काम पन
आज दशैँकाे मुख्य दिन, टीकाकाे उत्तम साइत सहित मन्त्र हेर्नुहोस्…
दुर्गाप'क्षको मुख्य दिन आज विजयादशमी, मान्यजन'को हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर मनाइँदैछ । घटस्था&पनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट अभिषेक गरी विजयादशमीको टीका लगाइन्छ । आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विज'यादशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यज'नबाट दुर्गाभवानीको प्रसादस्वरुप टीका र जमरा थापेर मनाइन्छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज देवी विसर्जनको साइत बिहान १०ः११ बजे रहेको जनाएको छ । टीका_प्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नेका लागि भने १०ः१९ बजे उत्तम रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले रासस'लाई जानकारी दिनुभयो । विजयाद'शमी आफैंँमा शुभ दिन भएकाले आज टीका लगाउन सामान्य मानिसले साइत खोज्नु नपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । “राज्य सञ्चाल:कले भने साइतमै टीका लगा'उनुपर्छ, राज्य सञ्चालकले शुभसाइतमा टीका लगाउँदा प्रभु, मन
हिन्दूहरुको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वतबारे आश्चार्यजनक पाँच रहस्य ! थाहा पाउनुहोस्
कैलाश पर्वत'का नाम जोकोहीले सुने'कै हुनुपर्छ । शिव पुराण, मत्स्य पुरणा, स्कन्द पुराण अथाव भगवान शिव'को महिमा वाचन गर्दा ‘कैलाश पर्वतको’ नाम र महि'माको जताततै चर्चा हुन्छ । देवता'का पनि देवता आरध्यदेव महादेव र माता पार्वतीको वा'सस्थान रहेको पवित्र पर्वत नै कैलाश पर्वत हो । पौ'राणिक ब्याख्या अनुसार यस पर्वतका चार मुखहरु स्पटिक, रुबी, निलम, र स्वर्ण श्रृंगारको प्रतिकको रुपमा अनेकौं रत्नले सुस्व'भित मुद्रामा रहेको छ । हेमश्रीङ्ग, वैद्युत, ककुन्दमान र वरुण, श्रिङ्ग'वान र हिरण्याश्रिङ्ग जस्ता छ वटा दिब्य पर्वत'हरुको बिचमा अवीस्थत यस पर्वतको'लाई कमलको फूलको प्रतिकको रुपमा पनि लिइन्छ । कैलाश पर्वत समुद्री सतहदेखि २२ हजार ६८ फिट उचाईमा पर्छ । हिमालयको उत्तरी क्षेत्र स्थित तिब्बतमा रहेको छ यो हिमाल निकै मनोरम पनि छ । प्राचीन काल'देखि नै विभिन्न धर्म'को लागि यसको विशेष महत्व रहेको छ । यस
यस्ता ४ काम गर्दा हुन्छ सधैं घरमा लक्ष्मीको वास, एक पटक सबैले पढ्नु,होस्
पुजा पाठ जुन घरमा पुजा पाठसँग सम्ब'न्धीत साना कुरामा ध्यान राखिन्छ र नियमित रुपमा भगवा'नको सेवा गरिन्छ, त्यस्तो घरमा कुनै दुख पीडा नहुने विश्वास रहेको छ। पुजा'सँग जोडिएका शास्त्रीय निमयम'को ध्यान राखेमा सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने तथा सुख समृद्धि आउने धार्मीक विश्वास छ।हिन्दु धर्मसँग जोडि'एका केही यस्ता परम्परा वा काम छन्, ती कुरा ध्यान दिदा भगवान्को कृपा प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। ती कामको प्रभावले गर्दा कहिलै दुख वा पी'डाको सामना गर्नु नपर्ने विश्वास गरिन्छ। घरमा धन धान्यको कुनै पनि कमी नहुने धार्मीक विश्वास छ। मन्दिर: पश्चिम दिशा तर्फ मुख फर्का'एर पुजा गर्नु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। त्यस्तै मन्दिर'को ढोका यदी पूर्व दिशा'मा भए छन् राम्रो हन्छ। प्रवेश द्धारको ठिक अगाडि ईश्वर'को मुर्ति भने कहिलै राख्नु हुँदैन्। घरमा मन्दिरको स्थापना गर्दा सबै भगवान'को कृपा मिल्ने विश्वास गरिन्छ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
ज्योतिष शास्त्री'हरुले मानिस'को जन्म समय'लाई आधार मानेर उसको भूत, भविष्य र वर्तमानका विषयमा फला'देश गर्छन् । शास्त्र'लाई आधार मानिर गरिने यस्ता फलादेशमा कति'पयले विश्वास मान्छन् भने कति'पयले विश्वान नलाग्ने बताए पनि चिना हेराउने, हात हेराउने, दैनिक राशिफल हेर्न भने पछि परेका हुँदैनन् । आज हामीले जन्मेको महिना अनुसार महिला'को स्वभाव पनि निर्धारण हुने ज्योति'षीय फलादेश केही प्रस्तुत गरेका छौं । कुन महिना जन्मेका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा ज्याेतिषी'हरुका फलादेश यस्ता छन्- बैसाख : यो महिना'मा जन्मि'एका महिला प्राय धनवान, राम्रो चित्त र बिचार भएका,कम खर्च गर्ने, क्रोध'वान, सुन्दर आँखा भएका हुन्छन । उनीहरूको जीव'नमा धन र सुख प्रशस्त प्राप्त गर्ने बताइन्छ । जेठ: जेठ महिनामा जन्मि'एका महिला'हरु प्राय विदेशमा बस्ने, शुभ चित्त र लामो आयु भएका हुन्छन् । उनी'हरूको जीवनमा सुख
शुरू भयो मलमास, अब के गर्न हुन्छ के हुँदैन ? थाहा पाउनुहोस्
हिन्दू परम्परा'नुसार मलमा'सको अवधि'मा शुभ कार्य गर्न नहुने धर्म:शास्त्रका विज्ञले बताए'का छन् । आज अपरान्ह ४ः५९ बजेदेखि शुरु भएको मल:मास असोज ३० गते राति १ः५३ बजे'सम्म रहनेछ । सो अवधिमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । वाल्मीकि विद्या'पीठ धर्मशास्त्र विभाग'का प्रमुख देवमणि भट्टराई मलमास र क्षयमास जस्ता समय'लाई शास्त्रले शुभ कार्य गर्न वर्जित गरेको बताउँछन् । मल'मासमा विवाह, व्रतबन्ध, पक्ष'अनुष्ठान, पुराणवाचन जस्ता कार्य गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने,“नित्य कर्महरु, नैतित्यक कर्महरु मल'मासभित्र गर्न सकिन्छ ।” यसमा घरमा गरिने निय'मित पूजापाठ, मन्दिर दर्शन, तिथि, बार या नक्षत्र मिलेर गर्ने योगहरु गर्न मिल्ने उनले बताए । मलमासको कृष्ण पक्षमा जन्मिएका वा मृ त्यु भएका'को तिथि निर्धारण गर्दा एक महिना पछि'को गरिन्छ । मल'मासको समयमा विवाह गरेको पहिलो वर्ष परेमा
साउन महिनामा किन लगाइन्छ हरियो चुरा र मेहन्दी ? यस्तो छ कारण: हेर्नुहोस्
साउने संक्रान्ति पर्व शुरु भए'सँगै महिलाहरुमा मेहेन्दी र हरियो चुरा लगाउने चलन साउनभरि परम्पराको रुपमा चलिआ'एको छ । प्राकृतिक रुपमा पनि हरि'यो महिना हो, साउन । वनजंगल, खेतवारी मात्र नभ'ई साउन महिना शुरु भएपछि युवतीका हातमा हरियो चुरा र मेहेन्दी देखिन्छ । विवा'हित महिला सौभाग्यको प्रतिकको रुपमा हरियो चुरा लगाउँछन् । अविवाहित युवती प'नि राम्रो वर प्राप्त होस् भन्ने भनी हरियो चुरा र मेहन्दी लगाउँछन । तर, यो चलन कहिले बाट आयो र किन साउन मै हरियो चुरा र मेंहन्दी लगाइन्छ भन्नेबारे सबै'लाई थाहा नहुन पनि सक्छ । हिन्दू धर्मग्रन्थका अनुसार ‘ साउनमा माता पार्वतीले पति महादेवलाई खुसी बनाई सौभाग्य प्राप्त गर्न हरिया चुरा, पोते र हातमा मेहेन्दी लगाएकी थिइन् । र साउनमा जताततै हरिया'ली हुने हुनाले त्यही हरियालीमा रमाएर महादेवबाट सौभाग्य प्राप्तिको खुसी प्राप्त गर्न पाइन् । ’ प्राचीन किंवदन्ती
आज साउने सोमबार, यसरी गर्नुहोस् भगवान् शिवको पूजा (मन्त्र सहित)
शास्त्र अनुसार हरेक महिना'को आ–आफनै महत्व छ । यसमा साउन महिनाले अझ धेरै नै महत्व राख्छ । पौराणिक मान्यता अनुसार यो महिनालाई भगवान शिवको महि'ना मानिन्छ । साउन महिनामा भगवान शिवको पुजा आराधना गरेमा म'नकामना पुरा हुन्छ भन्ने जन–विश्वास रहदै आएको छ । दोस्रो जन्ममा देवी सतीले पार्वतीको रुपमा राज्य हि'माचल र रानी मैनाको घरमा जन्म लिएपछि उनले यस अवस्था देखि नै महादेवलाई बरपाउ भनी साउन महिना देखि निरहार ब्रत बसेर महादेवलाई प्रसन्न पारी वर प्राप्त गरे'को कथा शास्त्रमा उल्ले'ख गरिएको छ । साथै यसै समयदे/खि भगवान शिवले यो महि'नालाई अति नै प्रिय म'हिना मानेको बुझिन्छ । यसमा साउनको सोमवार झनै प्रिय छ । यस महिनामा साउ'न भने जस्तै बारहरुमा पनि सोम'वार भगवान शिवको मन पर्ने वा'र हो । तर्सथ शिवको वर्त आराध'ना सोमवार नै गर्ने गरिन्छ । साउन महिनामा नीलकण्ठ भगवानलाई ज'लाभिषेक तथा रुद्राभिषेकको ठूलो महा
किन गरिन्छ नाग पूजा ? किन टासिन्छ नाग ? यस्तो छ ‘नाग महिमा’
श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने नाग पञ्चमी आज परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूलढो'कामा टाँसेर मनाइँदैछ । यसरी नागको तस्वीर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छीलगायत जीवले दुःख नदिनाका सा'थै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । सूर्योदयकालमा पञ्चमी तिथि' र षष्टीले युक्त पञ्चमी नागपूजाका लागि शुभ मानिने भएकाले शनिबार नागपञ्चमीको निर्णय गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति'का अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनु'भयो । आज वि'भिन्न आठ प्रकारका नागको पू'जा गरी दुबो, गाईको दूध, अक्षता आदि चढाउनुका साथै आफ्ना कुल नागका थानमा विशेष पूजा गरी खीर, रोटी लगायतका प्रसा'द चढाउने गरिन्छ । वैदिक मान्यता नाग पूजाको प्रचलन वैदिक कालदेखि नै शुरु भएको हो । वैदिक मान्यतानुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ । ना
हिन्दु धर्म, परम्पराअ'नुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नाग पञ्चमी आज नागको पूजा अर्चना गरी ना'ग पुजा मनाइँदै छ । घरको मूल ढोकामा नागको तस्बि'रसहित नाग'का अष्ट कुल अर्थात् अनन्त, बासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट र शंख नागको आजकै दिन पूजा आरा'धना गरिन्छ । यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा' वर्षभर घरमा नाग, सर्प, बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिना'का साथै अग्नि, मेघ र चट्याङ'को भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यस दिन बिहानै उठी स्ना'न गरी दीप, कलश, गणेश गरी गोबरको नाग बनाई 'पूजाआजा गरिन्छ । आजको दिनमा विभिन्न नागको वासस्थान भएका स्थानहरू पोखरी, पानी भए'को कुवा इना'रमा गएर पूजा गर्ने चलन छ । नाग पूजाको प्रचलन वैदिक का'लदेखि नै सुरु भएको हो । वैदिक मान्यता'अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ । नाग रिसाए भने पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि ना'ग